वामदेवको रहर, नेकपालाई कहर – Hamro Maulakalika
२३ असोज, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हरेक बैठकमा शीर्षनेताहरु वामदेव गौतमको किचकिचबाट आजित बनेका थिए । उनीहरु पार्टीको बैठक नसकिँदै बाहिर निस्किने बाहना खोज्थे । स्रोतका अनुसार पार्टीको हरेक बैठकको अन्त्यतिर ‘एकछिन एकछिन’ भन्दै वामदेवले आफू चुनाव लड्ने प्रसंग निकाल्थे । कहिले डोल्पा, कहिले दैलेख त कहिले बाँकेबाट चुनाव लड्छु भन्दै शीर्षनेताहरुलाई उनले ‘इरिटेड’ बनाइसकेका थिए ।
प्रचण्डको भूमिका के ?
कसरी गले रामवीर ?
रामवीर मानन्धर प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिन्थे । उनले ओलीलाई नै गुमराहमा राखेर पदबाट राजीनामा दिए । आखिर उनी कसरी सहमत भए त खाईपाई आएको पद त्याग्न ?
प्रचण्ड-वामदेवको यो कदमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने झस्काएको छ । यो उनका लागि अप्रत्याशित कुरा थियो ।
बर्दिया-१ बाट चुनाव हारेका वामदेवले संसदमा आउन मरिहत्ते गरेपछि नेकपाका नेताहरुले राष्ट्रिय सभामा जान सुझाएका थिए ।
अब उनी काठमाडौं-७ बाट चुनाव लड्ने लगभग निश्चित भएको छ । तर, जित्न भने सहज नभएको स्वयम् नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
स्थानीय नेवार समुदायको उम्मेदवार हुनु र कांग्रेसले राप्रपालाई समर्थन गर्नुले काठमाडौं ७ मा रामवीरको सहज जित भएको थियो । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारको लोकपि्रयता गिर्दो छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यशैलीले काठमाडौंवासी दिक्दार छन् । वामदेवको आफ्नै छवि पनि गतिलो छैन । अर्कोतर्फ उनलाई जिताउन पार्टी एक ढिक्का हुनेमै शंका छ ।
Previous ‘सभापति छान्ने अधिकार क्रियाशील सदस्यलाई दिऊँ’